Who are they?: သံဃာတော်တွေ သွေးမြေကျ (၁)လပြည့်နေမှာ စွမ်းအားရှင် အဆိုတော်များ နအဖကို အလုပ်ကျွေးပြုနေ
Posted by Who are They? at 6:11 AM
ဒီခွေးအဆိုတော်တွေ ဘယ်လို စဉ်းစားလဲမသိဘူး သူတ်ို့ကိုပိုက်ဆံပေးနေတာ ပြည်သူလူထု သူတို့ အလုပ်အကျွေးပြုနေတာ အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီခေတ်က အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီး အများစုတွေဟာ ဖက်ခွက်အဆန်ဆုံးဘဲ
ကျွန်တောသိရသလောက် ဒီခွေးအဆိုတော်တွေကို သတ်တာဒီစစ်ခွေးအစိုးရဘဲ သူတို့ ထုတ်သမျှခွေတွေ လမ်းဘေးမှာ ခိုးကူးတွေအနေနဲ့ရောက်တာ ရန်ကုန်က စစ်ခွေး တပ်ရင်းတွေထဲမှာ တပ်ရန်ပုံငွေဆိုပြီး ခိုးကူး လမ်းဘေးရောင်းတဲ့သူတွေက ဒီစစ်ခွေးတပ်တွေထဲ ဖောက်သည်ယူရောင်းကြသည်။ ဒါကို ဒင်းတို့လဲသိတယ် ဘယ်သူမှမပြောရဲဘူး အပြင်ကခိုးကူးတဲ့သူတွေတာ ဖမ်းခိုင်းရဲတာ။ ဒင်းတို့ကိုဒုက်ခရောက် အောင်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်း ဟိုမွေးနေ့ဆိုတက်ရ ဒီအခမ်းအနားဆို နန့်နန့်တက်ပါရနဲ့
ပြီးရင်ပြောသေးတယ် အတင်းခိုင်းလို့ပါတဲ့ မတက် မဆက်သွယ်တဲ့လူတွေလဲရှိတာဘဲ သူတို့ကိုက နန့်နန့်တက်ပါချင်နေတာ